Tigbuo Zọgbuo Ndị Kọmunist Kpatara Ataghị Isi M | Nwanna Ronald Jacka
E MERE YA BAPTIZIM N’AFỌ 1941
ONYE Ọ BỤ Ọ bụ ohu alaka ruo ihe karịrị afọ iri abụọ na ise.
N’ISI ỤTỤTỤ abalị mbụ n’ọnwa Ọktoba afọ 1965, ndị agha na-akwado òtù ndọrọ ndọrọ ọchịchị kọmunist nke Indoneshia gburu ndị isi amị isii a ma ama ná mbọ ha na-agba ịkwatu ọchịchị. Ihe a ha mere mere ka gọọmenti malite ịsụ ndị kọmunist akwụ ozugbo. Ọgba aghara bịara ju ebe niile n’Indoneshia. E gbukwara narị puku mmadụ ise a sịrị bụ́ ndị kọmunist.
Mgbe mbọ ahụ a gbara ịkwatu ọchịchị Indoneshia kụchara afọ n’ala, izu ole na ole agaakwa, otu onyeisi ndị amị gwara m na aha m dị n’ebe e dere aha ndị isi okpukpe ndị kọmunist chọrọ igbu n’ógbè anyị. Ọ gwakwara m na m chọọ, ya agaa gosi m ebe ha gwuru ili m. Ma, m ji nwayọọ gwa ya na mụ achọghị ịga hụ ili ahụ. N’ihi otú ihe si kwụrụ n’oge ahụ, achọghị m ka a hụ mụ na ya n’ihi na ọ ga-eme ka ndị mmadụ chewe na m na-etinyezi aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị.